Ihe omuma na azịza nke akwụkwọ nyocha nke ITIL 2017 - ụlọ akwụkwọ nkà ọgbara ọhụrụ
Nyocha akwụkwọ nke ITIL 2017 - Ajuju Ajụjụ na Azịza
ITIL bụ ndokwa nke omume maka nlekọta ọrụ IT nke na-agbanwe ọrụ IT na mkpa ego. Ịmara ihe ndị bụ isi nke ITIL bụ n'ụzọ dị oke egwu maka mkpakọrịta. Akwụkwọ ikikere ITIL maara ndị ọkachamara na nkwalite nke ITIL na mmejuputa ya. Lee ụfọdụ ajụjụ na azịza maka ule.
1. Kedu ka ITIL na-esi enyere aka na-akwụ ụgwọ ma na-ebelata ọnụ ọgụgụ nchịkọta nke ihe onwunwe maka nkwụnye ego IT?
Ntụnye ego nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na-agbaji oge ọrụ ha dị ka ọrụ a na-edeghị akwụkwọ ga-adị mkpa maka ọrụ a haziri ahazi. ITIL na - eme ka ndị mkpakọrịta kwụsị ọrụ a ma na - enye ndị nnọchianya aka itinye uche n'iche ọnụ ọnụahịa na ọrụ ndị ọzọ na mpaghara ha.
2. Ònye ruru eru ịhọrọ iwu nke mgbanwe gbanwere n'ime usoro ITIL na-agbanwe agbanwe usoro?
Nhọrọ a na-ewerekarị site na Change Manager. Ọ na-emesi obi ike na ụzọ ndị ahụ na-eme ihe mgbaru ọsọ ha n'ime oke o kwere omume ma na-emefu ihe ndị na-agaghị emeli site n'ịgbasawanye ọrụ na iji ọrụ. Ọ na-etinye uche na mgbanwe na usoro azụmahịa, akụkụ ọrụ, ụlọ ọrụ na ihe ọhụrụ na mkpakọrịta.
3. Kedu ihe nyocha emere mgbe a gbanwechara Change?
A na-akpọ nyocha ahụ Post Implementation Review (PIR). Nke a bụ nyochaa na nyochaa nghazi ngwọta zuru ezu. A na-eme ya mgbe ọ na-agba ọsọ, na mgbe ụfọdụ mgbe njedebe nke azụmahịa ahụ gasịrị. PIR na-enyocha mmụba nke ọganihu ọganihu mgbe usoro ahụ dị n'ime ihe okike maka ihe dị ka ọnwa isii.
4. Usoro usoro nke ITIL na-achota na ndi otu a maara banyere ohuru ohuru ohuru?
Nchịkwa Ike na-emesi ya ike na mkpakọrịta ahụ ka na-echefu mgbanwe ọhụrụ. Ọ na-akwado na enwere ike ịchọta IT na oge zuru oke na olu ziri ezi na ego kwesiri ekwesara iji arụ ọrụ dị oke egwu.
5. N'ime ohere na Onye Nlekọta Ọrụ Nchịkwa chọrọ nkwenye banyere ebe nbanye na Ụlọ ọrụ Service ga-aza nwere ike ịnweta ọnụego oku n'ime 10 sekọnd, nke na-ekwupụta na nkwekọrịta Service Desk na mkpa a ga-edekọ?
Enwere nkwekọrịta nke aha nkwekọrịta ọrụ (OLA) nke gosipụtara otú iche iche IT si bunyere n'usoro atụmatụ iji gosi ọrụ ma ọ bụ ndokwa nke ọrụ. E bu n'obi ilekọta nsogbu nke ụlọ ahịa IT site n'igosi ndokwa maka njirisi na ọrụ IT iji arụ ọrụ ọ bụla.
6. Kedu usoro nlekọta ọrụ nlekọta na-eji usoro njikwa na nchọpụta ihe egwu?
Usoro abụọ ahụ bụ IT Suite Management Service na Management Njikwa.
7. Kọwaa okwu Pọtụfoli Ọrụ, Ndepụta Ọrụ na usoro ozi.
Pọtụfoliyo ọrụ: Nke a na-akọwa ọrụ nke ndị na-ebu ọrụ na-agafefe na ahịa dị iche iche na ndị ahịa. Njikwa Pọtụfụ Ọrụ na-arụkọ ọrụ na folda ọrụ. Ọ na-eme ka o jide n'aka na onye ọrụ ahụ na-ahụ maka ọrụ nwere ọrụ iji zụọ ahịa ahịa dị mkpa na ọkwa nrịba ama ziri ezi.
Ntuziaka ọrụ: Nke a bụ mpaghara nke Pọtụfoli Ọrụ. Ọ na-edekọ ọrụ ndị a ga-enye ndị ahịa. Ntinye ọrụ ntanetị na-edekọ ihe ọhụrụ na inye onyinye nke otu òtù.
Ogologo ozi: Ọ gụnyere ọrụ na-arụ ọrụ. Ọ na-ekwu maka ọrụ ndị ga-abịa n'ọdịnihu na site na ọrụ ndị na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ.
8. Kọwaa CMIS, AMIS na KEDB.
Ihe ọmụma Management ikike (CMIS): Ọ bụ ndokwa nke ike ntọala IT, iji na mkpochapụ ihe ọmụma gbakọtara ma wepụ ma ọ dịkarịa ala otu ọdụ data.
Nweta ozi nlebara anya (AMIS): Ọ bụ ngosipụta nke nnweta niile nnweta Management na-ewepụ n'ebe dị iche iche.
Ihe nchekwa data edoghi anya (KEDB): A maara nke ọma bụ esemokwu na onye ọkwọ ụgbọala kachasị ederede yana ọrụ gburugburu. Edebere atụmatụ aghụghọ nke ọhụụ ọ bụla na nchekwa data mara.
Edere ya ka ị gaa ọzụzụ ITIL ka ndị mmadụ wee nwee ohere ijikọta na ndị nkụzi ọkachamara ma jiri usoro ndị a mekwuo ihe ọmụma ha. Ohere inweta ọrụ na-esote Ịme akwụkwọ ikikere ITIL.